Namuhla, iziguli eziningi ezinqunyiwe isidakamizwa "Zokson". Yokusetshenziswa, izinkomba kanye contraindications, nezindleko nokutholakala analogue - lawa imibuzo nezimpendulo ufuna eziningi abantu.
Lesi sidakamizwa itholakala ngendlela amaphilisi flat isiyingi umbala omhlophe (ngezinye izikhathi ephethe tinge kancane aphuzi). The main izidakamizwa esebenzayo doxazosin mesylate efomini. ithebhulethi ngasinye siqukethe 1, 2 noma 4 mg ingxenye.
Ngaphezu kwalokho, kukhona abakhona adjuvants ezithile, ikakhulukazi granulated microcrystalline cellulose, i-lactose, colloidal Silica anhydrous, magnesium stearate, sodium carboxymethyl isitashi sodium lauryl sulphate.
Izibhebhe Agcwele amabhamuza yizicucu 10. Omunye iphakheji kungenzeka 3, 9 noma 10 amabhamuza ezinjalo.
I asebenzayo izidakamizwa ingxenye (doxazosin) kuyinto blocker kukhethwa-alpha 1-adrenoceptors. Le mithi abe nethonya elihle urodynamics in iziguli Hyperplasia Prostatic. mphumela kungenxa nokuvinjelwa la mangqamuzana-alpha-1-adrenergic, okuyinto etholakala izicubu entanyeni esinyeni kanye capsule kanye stroma we wendlala indlala ngokwawo.
Ngaphezu kwalokho, imiphumela izidakamizwa e aphansi blood pressure, ngakho-ke kunciphisa inani neuropathy ukumelana semithambo. Futhi, lokhu kusho kuba nomphumela omuhle amazinga egazi lipid, kusukela ngokwezinga elikhulu kunciphisa lokuhlushwa cholesterol ne-triglyceride. Ngakho, i-izidakamizwa futhi kuvimbela ukuthuthukiswa isifo senhliziyo. "Zokson" kuholela ukwehla degree of kwesokunxele ventricular hypertrophy, kuvimbela platelet wokuhlanganisa futhi kunciphisa amathuba thrombus kumiswa. Nokho, izidakamizwa akunamthelela onqabayo umzimba.
Emva kokuthatha iphilisi kunalokho ziyoncibilika ngokushesha futhi amuncwa izindonga ipheshana wokugaya ukudla. Ubuningi esiphezulu doxazosin igazi waphawula ngemva 1-2 amahora ngemva kokuphathwa. Isithako asebenzayo nakanjani plasma amaprotheni cishe ngo-98%. Ingxenye-ukuphila amahora 22. I metabolites kuthiwa excreted ngokuyinhloko indle.
Abafundi abaningi banesithakazelo umbuzo ukuthi, lapho izimo izidakamizwa kuyafaneleka "Zokson". Tablets zivame elibekelwe iziguli ingozi Hyperplasia Prostatic (BPH). Ikakhulu, i-sidakamizwa sisiza ukuqeda ukuchama iziyaluyalu kubangelwa kokucindezelwa kwesinye futhi ngomgudu womchamo (wokuphuthuma urinary, umuzwa hhayi bethulula ngokuphelele isinye, izifiso njalo ebusuku, nokunye. D.).
Ngaphezu kwalokho, lapho kuboniswa khona ukusetshenziswa iwukuba kanye nomfutho wegazi ophezulu (blood pressure). By endleleni, uma isiguli uhlushwa Hyperplasia, futhi umfutho ophezulu wegazi amaphilisi isinyathelo ngesikhathi esisodwa zombili izinkomba. Ngezinye ingcindezi evamile, umuthi akakubangeli iguquka.
Izidakamizwa "Zokson": yokusetshenziswa
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi aqoke izidakamizwa ezinjalo kungaba onguchwepheshe. Udokotela iyakwazi ukuthatha amaphilisi 'Zokson ". Imiyalelo isicelo uthi umthamo incike inkinga, okuyinto etholakala isiguli futhi isimo jikelele umzimba wakhe.
Ngokwesibonelo, e -prostate adenoma, ngokuvamile inani lansuku zonke 2-4 mg (1-2 amaphilisi). Umuthi kumele kuthathwe kanye nsuku zonke nge ewuketshezi, kodwa qiniseka amanzi amaningi. esiphezulu I umthamo wansuku - 8 mg.
ukubukeka yenza okuhluke kakhulu lwemithi ophakeme wegazi. Ngokuvamile, isiguli yokuqala iqondiswa 1-2 mg isithako esisebenzayo. Lapho kuqala ngokuzinika nesineke, kuyinto efiselekayo ukubeka embhedeni, njengoba komthamo wokuqala imithi kungadala ezinye imiphumela emibi - lokhu kuyinto evamile. Khona-ke, inani izidakamizwa liyakhula kancane kancane ukufeza umphumela esiphezulu zokwelapha - esikhatsini lesinyenti kuba, iziguli ezidinga umthamo 8 mg. ubuningi sangemihla, okuyinto kunoma yiliphi icala ayikwazi kudlulwe, - lena 16 mg.
Isikhathi yokwelapha kunqunywa udokotela ukuba khona, kodwa ngaso leso sikhathi izibhebhe Site ukusetshenziswa isikhathi eside. Ezimweni eziningi, le nqubo yokwelapha ithatha cishe inyanga, ngemva kwalokho udinga ukuthatha ikhefu. Phakathi ukwelashwa, awukwazi ukushayela imoto, kanye ukudla uphuzo oludakayo.
Yiqiniso, umbuzo obalulekile ingabe zonke izigaba iziguli kungathatha lesi sidakamizwa "Zokson". Umhlahlandlela luthi abanye bába contra-izinkomba, lokhu izidakamizwa usenayo.
Okokuqala, phawula ukuthi lesi sidakamizwa akufanele kuthathwe in iziguli hypersensitivity kuya doxazosin, izidakamizwa quinazoline okunye, kanye nazo zonke ezinye izingxenye ezibhebheni. Futhi, izidakamizwa alisetshenziswa ekwelapheni izingane nentsha engaphansi kwengu-18.
Ukuze Izimo isihlobo zihlanganisa nokukhulelwa kanye lactation. Imiphumela yalezi ucwaningo lubonisa ukuthi izidakamizwa ayinayo imiphumela embryogenic noma teratogenic. Noma kunjalo, umphumela wawo umzimba we-fetus bengayiqondi ngokugcwele. Umuthi singathathwa kuphela uma kwenzeka ezuzisa ngenxa yomama umzimba engaba ingozi ngoba ingane ekhulayo.
"Zokson" imithi esetshenziswa kakhulu ngokucophelela ukwelapha iziguli hypotension orthostatic, stenosis yomthambo i-aorta noma mitral, kanye ezihlukahlukene umsebenzi kwesibindi iziyaluyalu.
Imiphumela emibi kanye nezinkinga kungenzeka
Kungabangela ezinye yezinkinga amaphilisi "Zokson"? Yokusetshenziswa kusikisela ukuthi abanye imiphumela emibi kungenzeka, futhi bathembele khona izinkinga isiguli. Ngokwesibonelo, abantu abaphethwe-high blood pressure, kuqala ngokuzinika izidakamizwa kungabangela hypotension orthostatic. Imiphumela engemihle Lingase lihlanganise isiyezi, asthenia, ukukhathala, ukuphathwa ikhanda, ukuvuvukala, ukozela ophikelelayo, isicanucanu.
Iziguli ingozi Hyperplasia Prostatic angase futhi abhekane nazo zonke izimpawu ngenhla. Ngaphezu kwalokho, amanye amadoda esekhala ukucasuka, priapism, nomlomo owomile. Ngezinye izikhathi ukwelashwa kungaholela ukuthuthukiswa gynecomastia, ama-enzyme isibindi ephakeme, i-jaundice. Akuvamile waphawula Alopecia, kwempilo izinso, kanye arthralgia, ukuba buthakathaka kwezicubu, ukuquleka, angaboni kahle, enkeneneza ezindlebeni, iphika, ukukhwehlela, bronchospasm. Nge ukuzwela kwabaningi izidakamizwa ingadala ukusabela iguliswa okuyinto kuhambisana ukuqubuka kwesikhumba, ububomvu, ukulunywa futhi edema.
Kakhulu akuvamile imithi kubangela yezinkinga ezinzima ezifana pectoris angina, isilethikusebenza, ingozi cerebrovascular.
Overdose futhi izimpawu zako ezisemqoka
Iziguli eziningi unesithakazelo umbuzo ukuthi izidakamizwa ukweqisa izidakamizwa "Zokson" kungenzeka. Manual ubonisa ukuthi izimo ezinjalo bhalisiwe ngempela. Ukuthatha Isikali Imiphumela likhulu kakhulu e ukwehla elibukhali blood pressure, ngesinye isikhathi esihambisana nokukhithika nokulahlekelwa ukwazi.
Ezimweni ezinjalo, isiguli aqambe amanga emhlane wakhe, ephakanyiswe imilenze ikhanda lakhe wakhothama, bese ushayele ambulensi. Ngokuvamile, lavage esiswini wokuqala bese iqondiswa esigulini, carbon isebenze noma ezinye sorbents. Esikhathini esizayo, ngokuba yokwelapha lingaze.
Izidakamizwa "Zokson": analogs futhi esikhundleni
Ukuze yezizathu ezithile bengakwamukeli esigulini ngasinye izidakamizwa. Ezimweni ezinjalo, ke into esiyibhekile umbuzo wokuthi kungaba nokuthile okuzothatha indawo lesi sidakamizwa "Zokson".
Izidakamizwa analogue Yiqiniso, zikhona. Ngokwesibonelo, ngenxa ukuzinza of ukugeleza umchamo kwezokwelapha evame ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana "Prostamed", "Vitaprost" futhi "Prostasabal". Kodwa izidakamizwa "Finasta" hhayi kuphela aqede izinkinga nge ukuchama, kodwa futhi kukusiza ukuba sinciphise ubukhulu endlaleni engasesinyeni. Ngu analogue zihlanganisa izidakamizwa ezifana "cardura" "Proscar", "Penester", "Adenostop", "Speman Forte" kanye nabanye abaningi. Eminye imithi ishibhile ngalolo ngenkathi intengo nezinye izidakamizwa iphezulu kakhulu. Kunoma yikuphi, awukwazi sithathe Analogue wedwa - ke kungenziwa kuphela nge udokotela ukuba khona.
Yiqiniso, inkinga yezindleko Kubalulekile esigulini ngasinye. Ngakho malini izobiza amaphilisi "Zokson"? Inani Yiqiniso, kuzoncika ezintweni eziningi. Ikakhulukazi, ukunakekelwa okufanele athathe umkhiqizi, idolobha lokuhlala, inqubomgomo yezezimali Ikhemisi, njll D.
Ngokwesilinganiso, amaphilisi 30 nge umthamo 1 mg kuyokulahlekisela ruble 210-270. Ngesikhathi esifanayo, iphakethe efanayo amaphilisi amathathu, kodwa umthamo 2 mg isithako esisebenzayo abiza ruble mayelana 320-400. By the way, ezimweni eziningi, omunye iphakethe kwanele ukuba indlela yokwelashwa.
Izibuyekezo iziguli nodokotela
Yiqiniso, iziguli eziningi unesithakazelo umbuzo yini empeleni bacabanga ochwepheshe kanye neziguli mayelana "Zokson" ukulungiselela. Uphenyo odokotela akhayo - isidakamizwa ubhekana ngempela nge umsebenzi wayo oyinhloko, normaliziruya ukuchama yezifo ezihlukahlukene wendlala. Ngaphezu kwalokho, amaphilisi ukusiza ukugcina umfutho wegazi lakho, okuyinto ebaluleke kakhulu, unikezwa iqiniso lokuthi ngokuvamile kakhulu kuthinta abantu abadala ezifweni wendlala.
Iziguli futhi ushiye okubuyayo. Ngokusho kwabo, umphumela amaphilisi ibonakala ngemuva kwezinsuku ezimbalwa nje ngemva Ukuqalwa yokwelapha. Umuthi empeleni kuthuthukisa izinga lokuphila iziguli besilisa. Kalula Kuyaphawuleka ukuthi izidakamizwa kufanele kuthathwe kanye kuphela ngosuku. Futhi izindleko kuba impela enengqondo, okuyilona elisebenzayo futhi inzuzo enkulu.